Arday Soomaaliyeed oo Deeqo Waxbarasho lagu Guddoonsiiyay Columbus, OHIO |
Sannad walba xilligaan oo kale magaalada Columbus Gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka waxaa lagu qabtaa xaflad loogu talo galay ardada dhamaysatay dugsiyada Sare iyo kuliyadaha kala geddisan ee gobolka Ohio.
Xafladan oo ay qeybaha bulashada, madaxda gobolka iyo ardada intuba ka soo qeybgalaan waxaa soo abaabulay isla markaana soo waday mudo 7 sano ah Hay’ada SomaliCAN, oo ah hay’ad u adeegta bulshada, waxaana laf dhabar u ah Prof. Jibril Mohamed iyo Wasiirkii hore ee waxbarashada Somalia Dr. Abdinur Sh. Mohamed.
Intii ay xafladu socotay dhiiri-galinta ah waxaa ka hadlay masuuliyiin, waalidiin, macallimiin, Aqoon-yahanno, culumo, iyo dad waxbadan ku soo jiray waxbarashada kuwaas oo ardada Soomaaliyeed ku dhiirri-galinayay in ay sii laba jibbaaraan dadaalkooda isla markaana ay gaaraan yoolka noloshooda oo ku xiran ka mira dhalinta dadaalka ay soo bilaabeen.
Waxaa goobta ka hadlay madaxda dowladda hoose, gobolka iyo heer qaran iyada oo uu casuumaadda iyo isbarashadaba hormuud ka ahaa Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiriyaha xafiiska duqa magaalada iyo jaaliyadaha dalka ku cusub.
Doorka waliidiinta Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamay mid aan qarsoomi karin iyada oo loo mahad celiyay waalid walba oo ubadkiisa gaarsiiyay meel uu ka sii soconkaro. Khadra Maxamed oo madax ka ah ururka haweenka Soomaaliyeed ee Ohio iyo weliba isutagga ururrada Afrika ee Ohio ayaa u mahadcelisay waaliddiinta una hambalyaysay ardada.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka soo qeybgasha xafladan sanadwalba waxa ay ka helaan deeqo wax-barasho iyo dhiiranaan ay ku sii wataan waxbarashadooda. Deeqaha waxbarasho waxaa gacan weyn ka geysta qareennada Flickinger Legal Group oo muddo dheer la shaqaynayay bulshada Soomaaliyeed.
Sannadkan waxaa abaalmarin la gudoonsiiyay 13 Arday oo kala ahaa lix wiil iyo toddobo gabdhood. 12 ka mid ah waxaa la guddoonsiiyay deeqo waxbarasho oo qaab nasiib ah lagu xulay halka hal gabar ay ku guulaysatay abaalmarin ka sareeysa mida ardada kale la gudoonsiiyay, gabadhaas oo ku soo baxday ardagii ugu sareeyay sanadkan dhanka waxbarashada, waana Amal Abdi.
Amal Abdi waxa ay ka soo baxday Dugsiga: Westland High School, waxaa oggolaansho iyo deeq waxbarasho siiyay in ka badan 10 jaamacadood oo ay ka mid yihiin jaamacadaha heerka sare ee “Ivy Leage” sida Harvard, Yale, Dartmouth, Columbia iyo Cornell. Amal xagaaga ayay billaabaysaa jaamacadda Harvard University.
Waxaa iyana Deeqo Waxbarasho Helay Ardayda kala ah;
01. Omar Ibrahim, Pickerington High School
02. Maryan Liban, Columbus Alternative High School
03. Abdigani Ahmed, Dublin Coffman High School
04. Ali Osman, Westerville South High School
05. Khalid Mohamed, Metro Early College High School
06. Habibo Barre, Westerville North High School
07. Abdikarim Mohamud, Gahanna Lincoln High School
08. Safiyo Mohamud, Columbus Alternative High School
09. Ahmed Yacoob, Central Crossing High School
10. Ridwaan Mohamed Koriyow, Westerville North High School
11. Firdowsa Hashi, Horizon Science Academy
12. Nimo Suleyman, Westerville South High School
Taageerada iyo Deeqdaan Waxbarasho, Waxaa gacan ka geystan meherado Soomaaliyeed iyo kuwo Soomaalida la shaqeeya oo ay ka mid yihiin: Flickinger Legal Group, Fifth Third Bank, Focus, FCCS, CareSource, Columbus CRC, OSU AAAS, the Buckeye Ranch, Zenith Academy, OSU Social Work, Denison University, Hiiraan Online, Midnimo Middle, Columbus Zoo, United Way, MAS, Twinkle Star, Enhanced, Khadra, Soofe, Abdinur, SomaliCAN, SSA, OSU Somali Studies Program.
Ugu dambeyn, Barnaamijka qalinjebinta iyo deeqaha waxbarashada Ohio ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo dedaalka dheeriga ah ee ardada iyo waaliddiinta Soomaaliyeed ka sameeyaan dhanka Wax-barashada. Xafladda qalinjebinta ayaa ku soo dhammaatay farxad iyo rayrayn iyada oo waaliddiinta iyo madaxda bulshadu hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen ardada ku guulaysatay deeqaha waxbarasho iyo dhammaan ardada ka baxday dugsiyada sare iyo jaamacadaha Ohio sannadkan 2016.
← Dowladda Soomaaliya iyo Jubaland oo ka wada hadlay arimo la xiriira amniga Qaranka
Wafdi ka Socda Midowga Afrika oo Qiimeynaya Doorashada oo Muqdisho soo Gaaray →